Window7ရဲ့ Taskbar က Icon လေးတွေကို သေးသေးလေးတွေ လုပ်ကြည့်ရအောင် ~ မျိုးကို
Window7ရဲ့ Taskbar က Icon လေးတွေကို သေးသေးလေးတွေ လုပ်ကြည့်ရအောင်
06:38 Technique, Window7No comments
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Window7Task bar က Icon လေးတွေက နည်းနည်း ကြီးနေတယ်လို့ထင်ရပါတယ်… Window XP မှာလို Task bar က Icon သေးသေးလေးတွေ သုံးနေကြဆိုရင်တော့ Window7မှာလည်း XP Style နဲ့ Task bar Icon သေးသေးလေးတွေ သုံးချင်ကောင်း သုံးချင်မှာပါ ။
Window7က Taskbar Icon လေးတွေရဲ့ Size ကို လွယ်ကူစွာပဲ လျှော့ချခွင့်ပြုပါတယ်… ဒါကို Window7ရဲ့ Start Menu Properties Option လေးက လုပ်ကြည့်ရအောင်ပါ…
1. Start Menu button လေးကို Right Click နှိပ်ပါ. ပြီး ရင် Properties ကိုရွေးပါ…
2. Taskbar Tab ကိုရွေးပါ။ ပြီးလျှင် Use Small Icons ကိုအမှန်ခြစ်ပါ။
3. Apply ပြီးလျှင် OK လိုက်ပါ။
ကဲ Taskbar Icon တွေဟာ အောက်က ပုံလေး လို သေးသွားပြီနော်…
ဒါဆိုရင် တော့ OK သွားပါပြီ…